प्रदर्शनी - Xingtai Huimao ट्रेडिंग कं, लिमिटेड
Xingtai Huimao ट्रेडिंग कं, लिमिटेड
समर्थन कल गर्नुहोस् + -0 86-०3१ -5 -२50०8१।
HUIMAO विभिन्न प्रदर्शनीहरु मा भाग लिएको छ कि ग्लोबल शीर्ष ब्रांडहरु र घरेलू र विदेशी अग्रणी कम्पनीहरु भेला भएको छ। उत्कृष्ट उत्पादनहरुको क्रम र उत्पादनहरुको मात्रा वर्ष बर्ष बढेको छ। हामीसँग धेरै साझेदारहरू छन्, ती सबै सबै निर्माणकर्ताहरू हुन् जसले धेरै वर्षदेखि सहयोग गरे।
हाम्रो उत्पादनहरू कोरिया, दुबई, इरान, ब्राजिल, रसिया र अन्य धेरै देशहरू र क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा निर्यात गरिन्छ। Huimao ले सँधै उत्पादनको गुणस्तरलाई ग्राहकहरूको मान्यता र गुणस्तरका प्रतिज्ञाहरू राख्न हाइलाइट गर्दछ। हामी विश्वास गर्छौं कि इमानदारीले भरोसा ल्याउँछ, आपसी बेनिफिटले दुबै विजेतालाई बनाउँछ।
HUIMAO प्रत्येक वर्ष प्रदर्शनीमा टेक्निकल सहयोग र विभिन्न देशहरूसँग आदानप्रदानको लागि भाग लिन्छ, ताकि हामी सँगै बढ्न सकौं।
Xingtai Huimao ट्रेडिंग कं, लिमिटेड स्वत: स्पेयर पार्ट्समा प्रोफेसनल निर्माता र आपूर्तिकर्ता हो। हाम्रो कारखाना Jvlu औद्योगिक क्षेत्र, Xingtai शहर, हेबै प्रान्त मा अवस्थित छ, रबर सीलिंग पार्ट्स र मोटर वाहनको तेल को उत्पादन क्षेत्र मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, जस्तै तेलको छाप, O- रिंग्स, गस्केट्स, झाडिहरू, इन्जिन तेल, चिकनाई तेल, आदि।
हलोजन, लुकाइएको बिचको भिन्नता ...
२०,०4,२१ जून १ 16, २०१।
के मलाई उच्च माइलेज तेल आवश्यक छ?
मेरो कारले कस्तो प्रकारको तेल लिन्छ?
एलेमेन्ट क्ल्याम्पि।, स्पेयर पार्ट्स, गाडी सहायक, सिलिंग पार्ट, आर्म बुशिंग नियन्त्रण गर्नुहोस्, सिलिकॉन रबर सील,